Cherry Jones na-esonye na ndị na-ese ihe nkiri "Fivebọchị ise na Ncheta" | Esi m mac
Cherry Jones na-esonye na ndị na-ese ihe nkiri "Fivebọchị ise na Ememe Ncheta"
Apple TV + usoro na-eto eto. Ndị nọ na bọọdụ mkpọsa ahụ na-aga n'ihu na-eme ka oge na oge na-abịa na-abawanye na ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme ihe nkiri na akụkụ nke ha. Anyi ekwughi banyere onye omee / omee. Anyị na-ekwu maka ndị ọkachamara dị oke mkpa ma dị mkpa ga-enye usoro a nnukwu ọnụnọ yana ogo dị elu. The penultimate isonyere Apple TV + ị bụ ndị ịrịba Cherry Jones na "Fivebọchị ise na Ncheta"
Onye mmeri Emmy na Tony, Cherry Jones, abanyela na ihe nkiri nke ihe nkiri Apple TV + na-abịa n'ihu "dramabọchị ise na Ncheta." Ọ ga-egwu Susan Mulderick, onye isi nke ndị nọọsụ na Hospitallọ Ọgwụ Ncheta na onye isi oche nke kọmitii njikere njikere ya, dị ka The Hollywood Reporter. Mgbe Hurricane Katrina gasịrị, ọ ghọrọ onye ọchịagha ahọpụtara n'ụlọ ọgwụ.
Jones, bụ onye a ma ama maka ọrụ ya Ichebe Jekọb, "Ntughari" na "Nwaanyị Okike", sonye na ndị otu nọ na ya Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. na Adepero Oduye. John Ridley na Carlton Cuse na-eme mgbanwe na ndị isi na-emepụta usoro. Na mgbakwunye, ha abụọ ga-eduzi ihe omume oge ụfọdụ. Fink, onye edemede nke akwukwo, ga-abu onye mmeputa ihe na usoro.
"Fivebọchị ise na Ememe Ncheta" na-akọ ihe kpatara ajọ ifufe Hurricane Katrina site na echiche nke Hospitallọ Ọgwụ Ncheta nke New Orleans. Dabere na akwụkwọ akụkọ ahụ site n'aka onye mmeri Pulitzer Sheri Fink, usoro a na-abanye n'ime nsogbu nke omume na ụkpụrụ omume a na-amanye ndị odide ahụ n'oge nsogbu ahụ.
Nzọụkwụ site na nzọụkwụ, Apple TV + na-eme nke ọma na kwa ụbọchị ịmatakwu mkpọsa nke usoro, akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri. Enwere ọtụtụ aka ekpe mana ụzọ na-aga n'ihu ma n'ezie maka àgwà ọ gaghị adị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Cherry Jones na-esonye na ndị na-ese ihe nkiri "Fivebọchị ise na Ememe Ncheta"
AirTag chọtaara igwe kwụ otu ebe na izu ohi